Dixood dhimay ee Dixoodada kale uun hala badbadiyo | Maalmahanews
Dixood dhimay ee Dixoodada kale uun hala badbadiyo
Inbadan oo asxaabta ah baa isoo waydiisay maxaad dixood alle haw naxariisto aad usoo odhan wayday? maxaad ugu ducayn wayday inuu alle janadiisa geeyo? Waxaan leeyahay runtii Dixood geesi ka baxay qarankan iyo siyaasadiisaba waa uu ahaa waanan ogsoonahay tiirarka adag ee uu dalka ku dhex laha iyo waxa uu ahaaba, waxaase jirta anigiyo saaxiibkay maxamed axmedba inaanu war badan usoo joognay misena aan ognahay xaqiiq badan oo ku saabsan jiritaanka caqiideed iyo diinta Dixoodba. Waxaanse aaminsahay inuu ahaa geesi dalka waxbadan taray, waxaan ogahay nuu ahaa muwaadin runtii afkiisa iyo addinkiisiba ugu adeegay dalkan iyo dadkanba.
Waxa uu ahaa geesi hal adag, dagan misena aqoon iyo garasho maadiba leh. Waxa uu ahaa halgamaa halgan dheer usoo galay xorayntii iyo waxtarkii dalkan. Waxa uu kamid aha tiirarki ad-adkaa ee dalka iyo dadkaba soo gaadhsiiyay halkay maanta joogaan.
Inbadan baa taladiisa iyo dhex joogiisaba uu wax ugu qabtay dalka. Halagamaagan indhaha li’I wuxuu ahaa taariikh iyo dheeman dhanka siyaasadda ah oo somaliland maanta ka hoyday!!! Diintu aamin sanaa iyo waxa uu haystayba waa wax uu alle isaga kala xisaabtami doono, waxaana waliba banaan in tiirarka diiniga ah ee islaamka la ixtiraamo oon muwaadin iyo halgamaa buu ahaa loo jabin waxbadan oo diini ah.
Halaga fiirsado weedhaha iyo qoralka lagu cabairayo hana laga fiirsado qaabka looga fal celinayo geerida Dixood.
Dixood waxa uu kamid ahaa dadka dalkan ugu soo shaqeeyay xirfadiisa siyaasinimo iyo tiisa dhkhtarnimoba waxaanan xasuustaa horaantii 2003 maruu gurigayaga nagu soo booqday si uu wax uga qabto habaryaratay oo waagaas aad u buktay iyada inbadan oo reer somalialnd ah buu ka qyb qaatay siduu u daweyn lahaa.
Abaal weyn buu ku lahaa dalka se taasi ka dhigi mayso in haddiiba aanu caqiidada islaamka haysan loogu tudho misena la yidhaah yaan waxba laga soo qaadin caqiidada ee hala eego muwaadinimadiisa. Tani noqon mayso qiil iyo qawl weyn oo wax u tari kara isaga iyo qarankaba . فَاسِقُونَ وَهُمْ وَمَاتُواْ وَرَسُولِهِ بِاللّهِ كَفَرُواْ إِنَّهُمْ قَبْرِهِ عَلَىَ تَقُمْ وَلاَ أَبَدًا مَّاتَ مِّنْهُم أَحَدٍ تُصَلِّ وَلاَ عَلَى أَقوله تعالى :}
Dixood waxaa jirtay in muran badani ku jiro caqiidadiisa diiniga ahayd, waliba waxaa in badan bulshada dhexdeeda iyo mareegaha bulshadu ku kulanto dhawr jeer aad loogu qaadaa dhigay isla arrintan waagii uu madaxweynuhu xila u magacaabay.
Arrintani ma ahayn uun wax shaki ku timid ee waxa aan xasuustaa sida uu nin aanu saaxiib nahay ii sheegay in berri dhaweyd oo shirkii golaha dhexe ee kulmiye dhacayay uu dixood yidhi” xeerka dhigaya in xubanaha wasiirada xukuumadda kamid noqda ay ka mid noqon karaan golaha dhexe ee xisbiga kulmiye wax laga badalo” markuu intaas yidhi baa nin kale madasha ka dhex kacay oo uu isna yidhi” diinta islaamka ayaa sal u ah dastuurka qaranka iyo ka xisbigee anna waxaan soo jeedin lahaa in xeerkaas laga doodo oo si adag loo fukliyo maadama oo ay jiraan xubno aan diinta haysa” intaas markuu yidhi dixood kaliya dhoola cadayn baa uu kaga jawaabay tiraabtaas.
Intan uun maaha ee waxa iyana jirtay in horaantii 2011 ay xubno isku sheegay somaliland christian society around the world ay soo saareen qoraal sidan u dhignaa” mudane madaxweyn siilaanyo anaga oo ah bahweynta kiristanka ah ee reer somalialnd waxa aanu ku xasuusinaynaa inaanu xukuumadihii kaa horeeyay ku lahayn tiro kooto ah oo ah oo isugu jirtay danjirayaal iyo la taliyayaalba sidaasi oo ay tahayna waxa aanu si xushmad iyo wanaag leh kaaga codsanaynaa inaad arrintayda eegtid oo kootadayada naloo madax banaaneeyo” muddo yar kadibna waxa la magacaabayba Dr. cumar dixood inuu noqdo la taliyaha madaxweynaha.
Dixood waxa uu ahaa saaxiib ay muddo dheer siilaanyo soo wada halgameen aadna iskugu dhawaayeen markaasi sababtaasi haku yimaado amaba haku yimaad tani codsiga ah ee waxa in badan muhmal ku jirin islaamnimadiisa. Qofkasta oo reer somaliland ahina xanta warka dixood waa hayay, dixood laftiisuna arrintaasi waa uu ogaa markaasi waxaa dhici lahayd arrintan dilka ka ah islaamka dhexdiisa inuu ka hadli lahaa maruun se taasi may dhicin. Marka laga yimaad daliilada aan soo qaadanayo waxa iyaduna cadayn ahayd qaabkii ay kusoo baxday tacsidii uu madaxweynuhu u diray ehelkii iyo qaraabdii uu ka baxay dr.cuamr dixood oo ka duwanayd dhamaanba kuwii uu hore madaxweynuhu hore usoo saari jiray.!!!!! Arrintani waa daliil cad oo muujinaya wax kajirnimada arrinta dixood. Si kastaba oo ay tahay dixood waxa uu ahaa halgamaa, wadani iyo qof dad jecel oo ay hagradeen dhamaannba ummadda reer somaliland ee uu dhex joogay iyo culimo awdiinka somaliland. Ceeb kla weyn iyo axmaqnimo ka weyni ma jirin in qof intaas oo sanno inagu dhex noolaa aan u nasteexayn waynay amaba ugu yaraan loo arki waayay cid ka hadlaysa arrintiisa oo dhanka naseexada amaba dhanka xukunka islaamiga ah ka istaagtay!!!!!
Marka kuwa inala nool aynu diinta iyo daacadda alle gaadhsiin waynay waxa aynu mashquulka ku nahay muxuu yahay?
Dixood ma maqasheen cid ka hadlaysay markii xilka loo dhiibay oo lahayd madaxweyne ninkaasi waa caynkaas ee maxaad xilka lataliyenimo ugu magacawday? Maalintaa reer baa xil loo magacaabay oo lagama gubanayn miyaa? Maanta markuu dhintay maxaa keenay in sidan looga hadlo? Waa hagrasho la sameeyay runtii oo ay ugu horayso culimadu? Haddii uu jiro hal sheekh oo maalintii la magacaabay ka hadlay waxa iga walaahi ah inaan la hagran se haddii maanta lagu hambabaray waa ayaan darro weyn!!!! Diinta inaga ayaa alle uga masuul ah dhulka guudkiisa waliba inteena cilmiga iyo aqoonta diiniga ah leh.
Dixood inbadan waa ogayd inaanu diinta haysan, sidaasi aawadeed muhiim maah umana arko siyaasadda kulmiye iyo tu SNM ba in loo jabiyo shuruucda diiniga ah.
Dadka aan xogaha culus kasoo xiganayona waxa kamid ah saaxiibkay cumar seerbiya oo wajahadda uu faysbuuga ku leeyahay inagula wadaagay qoraalkan yar oo kooban oo sidan u dhignaa: La kulankii Dr Dixood Dr Cumar Dixood oo ahaa siyaasi madaxweyne siilaanyo kala taliya arrimaha ictiraaf raadinta , isla markaana aaminsanaa diinta kiristanka una ololayn jiray qaadashadeeda waxa jirtay maalin aanu arooryo hore ku sheekaysanay Hargeysa , anigu wax badan kama aqoonin intii ka horaysay maalinkaasi, kaliya in uu xilkaasi hayo oo uu madaxweyne Siilaanyo u yahay la taliye iyo xan kale oo ku saabsan mabdi’iisa diimeed aan ka ahayn mooyee. waxa uu iiga waramay fahamkiisa ku aadan manhajka waxbarasho ee ardayda Soomaaliland oo uu sheegay in uu daraasad ku sameeyey uu qabo waxa uu ii sheegay in loo baahan yahay in laga saaro waxii dhaqan carbeed ah ee ku jira manhajkaasi . waxa kale oo uu ii sheegay in dhibaatooyinka in badan bulshada Soomaalida ku dhaca ay kaw ka tahay mabda’a diineed ee ay haystaan ee islaamiga ah. isla sheekadiisa waxa uu ku xusay in uu diinta islaamka uu hore uga baxay , taasi uu ku sheegay inay noloshiisa wax badan oo togan ka bedeshay . waxa uu intaasi ku daray in uu waajib ka saaran yahay fidinta diinta kiristanka , waxa kale oo uu aaminsanaa in Somaliland loo sameeyo wasaarada diimaha bedelka ay hadda ay tahay wasaarada diinta Dr Dixood ayaa Hargeysa ku geeriyooday”
Intani uu cumar seerbiya oo ah wariye hargeysa ku nool inala wadaagay marka laga tago waxa jirtay mar aan hargeysa aan kula kulmay Dr omer dixood oo aan qisadan la kulmay: Addis-ababa waxaan jaar ku nahay xaaska cumar dixood ee ethopianada ah iyo waliba meherada ganacsi ee ay ku leedahay ethiopia oo gurigayga sakada kasii jeeda ah. Xaaska dixood waa naag gaalad ah si badheedh ahna markaanu isku waraysanay waxay nagula kaftan tay “xaajigaygu waa dr somali ah diinta aan haystana wuu ila haystaa haddana lacag badan baanu leenahay ee maxaad sidaas u noqon waydeen?. Haka biqina dalkiina waayo isaguba waa lataliyaha madaxweynaha isaga oon islaamka aaminsanayn”. Waxa aan isla meherada kula kulmay maalin kale isaga oo hor taagan oo saaran gaadhi nooha ah oo numberka somaliland ku yaal oo xaaskiisu marar dalkan ku timaad , waan ku leexday oon salaamay anoo isku sheegay inaan yahay arday halkan jaamacad ka dhigta intii aan la taagnaa waxa kaliya ee aan ka wada hadlaynay waxay ahayd arrin diinta ku saabsan waxa aanan hadalkiisa si badheedha uga dhex helay caqiidadiisa sxb. Waxa uu igu yidhi” Diinta kiristaanku waa xasilooni iyo nolol dagan”
Dhimay maanta dixood isaga iyo alllihii kawkan abuurayna waa ay kulmi doonaan waanay xisaabtami doonaan, sidaasi daraadeed waxa inala gudboon in:
Ø Laga fikiro qaabkii loo aasi lahaa, xagii lagu aasi lahaa, waxa inooga qorshe ah kumaanaanka kale ee diinta aan haysane hargeysa ku nool iyo doorka ay culimadu ku yeelan karto dadkaasi sidii wacdi iyo waanoba wax loogu sheegi lahaa.
Ø Dixood xabaashiisa ayay dad badani iswaydiinayaan xaggii laga dhigi lahaa iyo qaabkii loo aasi lahaaba, se anigay waxay ila tahay seddex midkood:
Ø In xabaalihii ingiriisku dadkiisa ku aasi jiray ee hargeysa ku yaalay lagu aaso
Ø In la aasaaso xabaalo hor leh oo cusub oo lagu aaso dadka an diinta haysan ee raba in somaliland lagu aaso( waa ay adag tahay tni inay dhacdo sababo qabali iyo diini ahba awgood)
Ø In haddii xaaskiisa iyo caruurtiisu rabaan in loo geeyo halkay ku nool yihiin loo qaado misena lagu aaso
Ø In haddiiba haddii ay so doontaan hay’ado kiristan ahi la siiyo( inkasta oonan jeclaysanyn tan danbe)
Motiveska diiniga ah iyo kuwa siyaasiga ha in la kala dhawro oo waliba si wacan looga fiirsadaa waa mid wanaag iyo sharaf u ah qofka iyo dadnimadaba. Sida maanta looga hadlayo loogana doodayo maxaa maalintuu noolaa looga hadli waayay? Dixood dhimay ee hadda uun tallo hala galo dixoodada kale lagu badbadinayo…
Gabogabadii, waxaan leeyahay madaxda adduunak ee afrikan iyo cadaanba leh diintay doonaan ha haystaane wixii taariikh ee hor leh ee laga dhaxli karo waa la dhawraa, meel la dhigaa misena taariikh hadha iyo marjac aqooneed noqotaa sidaasi aawadeed wixii wanaag aqooneed iyo mid siyaasi ah ee laga dhaxli karo mr . cuamr dixood waxaan jeclaan lahaa in laga reebo oo la qoro maada oo uu ahaa geesi waxyaalo badan oo qarankan taariikh u ah ku suntan.
W/Q: MOHAMED ABDILAAHI BIIHI